ILakeview lonke ixesha lonyaka ekhaya kwiLake Winnipeg
ILakeview unyaka wonke ikhaya lilungele ukuloba umkhenkce ebusika kunye nokuphumla elunxwemeni ehlotyeni! Ngaphantsi komzuzu omnye ukuhamba ukuya kulwandle oluhle olunesanti. Ixesha lonke ikhaya lihlala kwindawo ebanzi kabini. Izolile kwaye ikhululekile ngefenitshala yanamhlanje. Igumbi lokulala elikhulu linebhedi enkulukazi. Igumbi lokulala lesibini lineebhedi ezimbini zomntu omnye. Ikhitshi egcwele ngokupheleleyo. Akutshaywa kwaye akukho zilwanyana zasekhaya nceda. Ubuninzi beendwendwe ezi-4. Idekhi enkulu yetrex eneBbq.
Izaphulelo zeveki e-1 kunye ne-1 yenyanga yokuhlala ekhoyo.
Nje ukuba ubhaliso luqinisekisiwe, nceda ucofe ku-" info for iindwendwe/inkcukacha zokubhukisha ngeposi" uze ucofe ku-" guest manual" ukuze ufumane zonke iinkcukacha malunga nokubonelelwayo kunye nemiyalelo yekhaya.
Andifumaneki ngokobuqu nangona kunjalo unokufumaneka ngeseli okanye isicatshulwa ngoko nangoko ngayo nayiphi na inkxalabo. Iinombolo zeeseli zidweliswe phantsi kwe-"guest manual". Ndijonge phambili ekujonganeni nayo nayiphi na imibuzo / iinkxalabo onokuthi ube nazo kwaye ndiza kuzama ukwenza iholide yakho ibe yokuphumla kwaye ikhumbuleke.
Andifumaneki ngokobuqu nangona kunjalo unokufumaneka ngeseli okanye isicatshulwa ngoko nangoko ngayo nayiphi na inkxalabo. Iinombolo zeeseli zidweliswe phantsi kwe-"guest manual".…